Ampandehano ny famerana amin'ny iPad | Vaovao IPhone
Ampandehano ny famerana amin'ny iPad anao
IPad dia fitaovana iray ho an'ny fianakaviana iray manontolo. Mifanohitra amin'izay mety hitranga amin'ny iPhone, ao an-trano dia mahazatra ny fampiasana azy io ny olona rehetra, ary misy ny loza aterany. Tsy vao sambany ianao mahita ny rindranasa mikorontana, na voafafa, na mahita ilay kely milalao zavatra tsy mendrika amin'ny taonany, dia alao sary an-tsaina raha GTA: Solombavambahoaka ary ny tovolahy ao an-trano no mandray azy. Amin'ireto tranga ireto, raha tsy manana jailbreak isika, dia misy ny Fepetra tonga ao amin'ny fikirakiran'ny iOS, tsy hoe vahaolana feno izany, fa afaka mamonjy anao ny aretin'andoha hafahafa.
Tsy maintsy mandeha any amin'ny Settings> General> Restrensions isika ary hampandeha azy ireo. Hangataka antsika amin'ny tenimiafina 4-digit, izay tsy maintsy averintsika. Aza adino izany satria mila izany ianao mba hanafoanana azy ireo isaky ny maniry ianao, ka aleo izy fanalahidy izay ampiasainao matetika.
Raha vantany vao nampavitrika azy ireo ianao afaka misafidy izay ekenao ianao ary izay tsy. Aza hadino fa avela ny "amin'ny manga", ary ny "fotsy" dia tsy avela. Betsaka ny safidy, manomboka amin'ny fametrahana na fanesorana rindranasa, fidirana amin'ny iTunes, fakan-tsary na FaceTime, hatramin'ny fampiasana Siri na famelana fiteny mazava.
Azonao atao koa mametra ny sarimihetsika, mifantina hatramin'ny taona firy avela hamokatra. Ireo izay mety amin'ny olon-dehibe mihoatra ny taonany dia hanjavona ao amin'ny tranomboky iPad, na dia tsy voafafa aza izy ireo, rehefa esorinao ny fetra dia hiseho indray izy ireo. Tena ilaina ho antsika izay manana toko Walking Dead ao amin'ny iPad.
Azonao atao ny mandeha mizaha ireo safidy rehetra ahafahanao mametra ary mamela azy io araka ny itiavanao azy. Rehefa tsy tianao intsony ny hananan'ny fameperana, miverena amin'ny Settings> General> Fepetra ary esory izy, miditra indray ny lakile napetrakao tamin'ny voalohany. Tadidio fa raha mametra ny fampiharana ianao dia hanjavona tsy ho eo amin'ny lohataonao izy ireo, saingy tsy esorina izy ireo, hiseho indray izy ireo rehefa avelanao indray izy ireo, koa aza mikoropaka raha hitanao fa tsy manana ny AppStore ianao.
Ohatra, nofepako ny Safari sy FaceTime ary nanjavona tsy ho eo amin'ny dock iPad-ko izy ireo. Araka ny nolazaiko tany am-piandohana, tsy ny vahaolana tonga lafatra, ary misy lesoka ihany koa io, ary izany ilay fampiharana apetranao ary manjavona izy, rehefa avelanao indray izy io, dia mipoitra ivelan'ny toerana nisy anao io, tsy manaja ny toerana taloha nisy azy. Ary zavatra iray hafa mety hihatsara, dia ny tsy fahatsiarovany ny fetra tsindraindray, mila misafidy azy ireo tsirairay ianao isaky ny mampandeha azy ireo.
Fanazavana fanampiny - Grand Theft Auto: Vice City ho an'ny iOS, miverina amin'ny taona 80.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ampandehano ny famerana amin'ny iPad anao
Izany efa fantatro ary tena tsara izany, fa ahoana no fanovana ny kaody fidirana famerana ???
Mampiato ary avereno averina izy ireo
Ahoana no hialako amin'ny fampandoavam-bola ahy ho an'ireo zavatra tsy novidiko?
Maria Cristina Barrios Martinelli dia hoy izy:
Miampanga ahy zavatra tsy mifanaraka izy ireo, inona no hataoko ???
Valiny tamin'i María Cristina Barrios Martinelli
Juan g gomez dia hoy izy:
Izy ireo dia manome vola ny carte de crédit ahy amin'ny famandrihana iray izay nofoanako mihoatra ny iray volana lasa izay, antsoina hoe apple apeliko. Ampianaro aho. MISAOTRA
Valio i Juan g gomez
lucila dia hoy izy:
Salama, vao nahita an'ity fampahalalana ity izay efa ela be aho ary satria tsy hitako ilay daty, dia tsy azoko atao ny manamarina raha efa nampidirina ao amin'ny kaontiko ny vola nifanarahan'izy ireo hamerina ahy.
Te-hangataka amin'izy ireo aho mba hanamafy izany na hanome ahy ny datin'ny famerenam-bola hanamarinana izany
Mankasitraka ny fandinihana aho!
Mamaly an'i lucila
Binary Clock: ovao ny famantaranandro fanidiana hidinao amin'ny famantaranandro roa (Cydia)
Plex milalao endrika video amin'ny iPad-nao